Maalinta: 20-ka July, 2017
Nidaamka Nidaamka lagu Isticmaalayo Duruufaha: Shanlahafa, oo heerkulka hawadu kor u kaco heerarka 45; Degmada Metropolitan waxay udub-dhexaad u tahay nidaamka tamarta ee joogsiyada iyo nidaamka wareega ee ay dhaqaajiso si looga hortago muwaadiniinta inay saameyn ku yeeshaan kuleylka. [More ...]
Tareen Taariikhi Koronto Ku shaqeeya (Solar Powered)! Waddooyinka Tareenka ee Hindiya waxay bilaabayaan mashruuc cusub oo lagu dhimayo marinka karboonka ee tareenka oo kor loogu qaado wacyiga. Wadooyinka Tareenka ee Hindiya, tareenadu waxay yareeyaan raad raaca kaarboonka iyo wacyiga [More ...]
Wasiirka Arimaha Gudaha ayaa kaqeybqaagay Mashruuca Xarunta Dhexe ee Logist ee Saxiixa ee Kars
Wasiirka Arslan ayaa ka qeybgalay xafladda Saxeexida Saxeexa Central logto ee Magaalada Kars: Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan ayaa booqday Kars si ay u kormeeraan wadada tareenka ee Baku-Tbilisi-Kars iyaga oo kaashanaya Azerbaijan iyo SBK Holding. [More ...]
Isku-shubka Akhisar ee Magaalada wuxuu si joogto ah u shaqeeyaa
Howlaha Isugeynta Magaalada Akhisar waa Sii Socda: TCDD İzmir 3. Maamulaha gobolka Selim Koçbay wuxuu dib u eegay mashruuca Isgoyska Magaalada Akhisar ee ku yaal Akhisar. TCDD 3. Maareeyaha Gobolka Selim Koçbay [More ...]
Wasiirka Gaadiidka Ahmet Arslan ayaa warbixin ka bixiyay qorista shaqaalaha. Sidaas awgeed, qoritaanka shaqaalaha ee TCDD, KGM iyo PTT ayaa sii socon doona. Goorma ayaa TCDD, PTT, Wadooyinka Soo iibsiga Shaqaalaha Rayidka ah la sameyn doonaa? Gaadiidka, Badda iyo Isgaarsiinta [More ...]
Maxaa ku socdaa jidadka tareenada?
Kali-talisnimadu waa sharraxaad taariikhi ah: yatırım Ma jiro wax maal-gashi oo laga helo hay'ad aan la iibin doonin. ”Waa maxay taasi micnaheedu? Xusuusnow Dhirta Dhuxusha ee Zonguldak, halkaas oo xitaa ciddi aan ciduna u dhowayn sanadka 40. Kadib Eti [More ...]
Diyaaradda ugu horreysa ee tagta gegida diyaaradaha ee 3 waxay degeysaa Febraayo: 50 waxaa si toos ah looga baahiyaa TV-ga TRT HABER oo la socota TRT NEWS [More ...]
RayHaber 20.07.2017 Warbixinta Shirka
Cusboonaysiinta Rakibaadda kuleylka Bartamaha iyo Nidaamka Kabka Dab Damiska Nidaamka biyaha tubada Dabka ee Dab bakhtiinta Ku rakibidda Dhismooyinka Dhismooyinka ee Xarunta Saldhigga Samsun Dhexroor ah 760 mm Dhisme Isboorti oo dhameystiran ayaa la iibsan doonaa (TÜLOMSAŞ) Anadolu [More ...]
MADAXWEYNAHA UDHB Aka booqday DATEM
Maareeyaha UDHB Aka ayaa booqday DATEM: Miisaaniyadda Wasaaradda Gaadiidka, Arimaha Badbaadada iyo Isgaadhsiinta Suat Hayri Aka iyo Ku-Xigeenka Wakiilka Orhan Birdal, Agaasimaha Guud ee TCDD İsa Apaydın Iyada oo ay weheliso Cilmi-baarista Waddada Tareenka [More ...]
Abaabulka Wax Soo Saarka Gudaha iyo Gudaha ee Wadashaqeynta TCDD iyo ARUS: 18 Luulyo 2017 Talaadada iyada oo lala kaashanayo TCDD iyo Kooxda Nidaamka Gaadiidka Raadinta ee Anatolian (ARUS) marka loo eego baaxadda abaabulka wax soo saarka heer qaran iyo heer qaran [More ...]
Wasiir Arslan: Geedi Waxaan samayn doonaa tareenka joogtada ah ee Wasaaradda
Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta, Ahmet Arslan, markii la dhameystiray Mashruuca Tareenka Baku-Tbilisi-Kars, wuxuu yiri: “Waxaan rajeyneynaa inaan mashruucan ku dhameystiri doono waqti aad u yar, waxaan sameyn doonaa wadada tareenka ee London ilaa Beijing. [More ...]
Mashiinka Xayiraadda Tunnelka oo la Buriyay [More ...]